သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၄) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on May 12, 2014 at 14:55 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယနေ့ စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် အစီအစဉ်မှာ Lana Winter-Hebert ရေးသားထားသည့် 10 Benefits of Reading: Why You Should Read Every Day ကိုမှီးညမ်းရေးသားထားတဲ့ စာဖတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး (၁၀) ခုအကြောင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့ ဆောင်းပါးရဲ့ ပထမပိုင်းကို ဖတ်ရှုပြီး မှတ်သားဖွယ် ဝေါဟာရအချို့ကိုလေ့လာကြပါမယ်။ ဘာသာစကားအနေနှင့်သာမက ဗဟုသုတပါရစေမဲ့ သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်လို့ပိုပြီးအဆင်ပြေစေဖို့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတစ်ပိုဒ် မြန်မာဘာသာတစ်ပိုဒ် ရေးပြထားပါတယ်။
စာဖတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး (၁၀)ခု - နေ့စဉ်စာဖတ်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်း
စာအုပ်တစ်အုပ်(သို့) အနှစ်သာရရှိတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကို သင်နောက်ဆုံးဖတ်ခဲ့တာ ဘယ်တုန်းကပါ လဲ? သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်စာဖတ်တဲ့ အလေ့အထဟာ Twitter ပေါ်မှာ တင်တဲ့ tweets တွေ၊ Facebook ပေါ်တင်တဲ့ စာသားအသစ်တွေ၊ သင့်ရဲ့ အသင့်စားကွေကာအုတ်အထုပ်က ညွှန်ကြားချက်တွေကို ဖတ်တာလောက်ကိုပဲ အဓိကထားနေပါသလား? သင်ဟာ ရေတွက်လို့မရတဲ့ စာဖတ်တဲ့ အလေ့အထမရှိတဲ့ လူတွေထဲက တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အခွင့်အရေးတွေကို လက်လွတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းမှာ ထင်ရှားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲက အောက်မှာ တချို့ကိုသာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
1. Mental Stimulation - Studies have shown that staying mentally stimulated can slow the progress of (or possibly even prevent) Alzheimer’s and Dementia, since keeping your brain active and engaged prevents it from losing power.
၁။ ဦးနှောက်ကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း - လေ့လာချက်များအရ ဦးနှောက်ကို အဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်မှုပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် Alzheimer's နဲ့ Dementia ရောဂါများတိုးတက်လာခြင်းကို နှောက်နှေးစေနိုင်ပါတယ်(သို့) တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဘာ ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဦးနှောက်ကို အအားမထားဘဲ အချိန်ပြည့်လှုပ်ရှားစေမယ်ဆိုရင် ၄င်း၏ စွမ်းဆောင်ချက်များ ကျဆုံးတာကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်။
2. Stress Reduction - No matter how much stress you have at work, in your personal relationships, or countless other issues faced in daily life, it all just slips away when you lose yourself inagreat story.
၂။ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ချပေးခြင်း - အလုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် (သို့) နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရရှိထားတဲ့ ဖိအား (stress) တွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ထဲမှာ နှစ်မြှုပ်ပစ်လိုက်တာနဲ့ အားလုံး ပြေလျော့သွားပါတယ်။
3. Knowledge - Everything you read fills your head with new bits of information, and you never know when it might come in handy.
၃။ ဗဟုသုတ - သင်ဖတ်သမျှစာတွေဟာ သင့်ဦးနှောက်ထဲကို အသိပညာ ဗဟုသုတအသစ်တွေကို ဖြည့်ပေးနေပါ တယ်။ ဒီဗဟုသုတတွေက တချိန်ချိန်မှာ ဘယ်လို အသုံးဝင်လာမယ်ဆိုတာကို မသိနိုင်ပါဘူး။
4. Vocabulary Expansion - The more you read, the more words you gain exposure to, and they’ll inevitably make their way into your everyday vocabulary. Being articulate and well-spoken is of great help in any profession.
၄။ ဝေါဟာရကျယ်ပြန့်လာခြင်း - စာများများဖတ်လေ ပိုများပြားတဲ့ ဝေါဟာရတွေနဲ့ ထိတွေ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဝေါဟာရတွေဟာ လည်း သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်သုံးဝေါဟာရစာရင်းထဲသို့ မလွဲမသွေဝင်ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတ်။ စကားအရာမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ပြောဆိုနိုင်တာ၊ ပြေပြစ်စွာ ပြောနိုင်တာဟာ ဘယ်အလုပ်အကိုင်မှာမဆို ကြီးမားတဲ့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
5. Memory Improvement - When you readabook, you have to remember an assortment of characters, their backgrounds, ambitions, history, and nuances, as well as the various arcs and sub-plots that weave their way through every story. Every new memory you create forges new synapses (brain pathways) and strengthens existing ones, which assists in short-term memory recall as well as stabilizing moods.
၅။ မှတ်ဉာဏ်အား ပိုမိုတိုးတက်လာခြင်း - သင့်အနေနဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်တဲ့အခါ ဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးတွေ၊ သူတို့ရဲ့ နောက်ခံအကြောင်း တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ သမိုင်းတွေ၊ မသိသာတဲ့ ကွဲပြားချက်တွေအပြင် ဒီဝတ္ထုရဲ့ ဇာတ်အိမ်ကို ပုံဖော်ပေးသွားတဲ့ အဝေ့အ၀ိုက်တွေပါတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေကို မှတ်ရပါတယ်။ အမှတ်ရစရာတစ်ခုခုဖြစ် ပေါ်လေတိုင်း ဦးနှောက်ရဲ့ အာရုံကြောလမ်းသစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေပြီး ရှိလက်စ အာရုံကြောအဟောင်း တွေကိုလည်း အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ ဒါကလည်း သင့်ရဲ့ အချိန်တိုတွင် မှတ်ဉာဏ်ကို အထောက်အပံ့ ပေးတဲ့ အပြင် စိတ်အနေအထားကိုလည်း တည်ငြိမ်စေပါတယ်။
substantial = မည်မည်ရရ ဖြစ်သော၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိသော၊ စို့စို့ပို့ပို့ရှိသော / Of considerable importance, size, or worth.
tweets = လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Twitter တွင် တင်သော စကားလုံး၊ အကြောင်အရာများ / Postings made on the social media website Twitter.
Alzheimer’s = Alzheimer’s disease / အယ်လဇိုင်းမားရောဂါ၊ သက်ကြီးများတွင်အဓိက ဖြစ်လေ့ရှိသည့် ဦးနှောက်မှတ်ညဏ်ချို့ယွင်းသောရောဂါတစ်မျိုး / Progressive mental deterioration that can occur in middle or old age, due to generalized degeneration of the brain. It is the commonest cause of premature senility.
dementia = ဦးနှောက်ရောဂါ (သို့) ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်တတ်သော စိတ်ကျမ်းမာရေးချို့ယွင်းမှုတစ်မျိုး / A chronic or persistent disorder of the mental processes caused by brain disease or injury and marked by memory
disorders, personality changes, and impaired reasoning.
inevitably = မလွဲဧကန်၊ မလွဲမသွေ / As is certain to happen; unavoidably.
well-spoken = စကားကြွယ်သော၊ အပြောကောင်းသော။ စကားကြွယ်သည်၊ အပြောကောင်းသည်။
nuance = မသိသာတဲ့ ကွဲပြားချက် / A subtle difference in or shade of meaning, expression, or sound
Permalink Reply by Science Scopian on May 13, 2014 at 4:25
It's very useful for youth and we well spent our time by reading it.
Permalink Reply by zawwinhlaing on May 22, 2014 at 4:17
Reading isagreat exercise for health when simple thought is thought objectively.